Arsenal oo 50 Milyan oo Gini ku iibinaysa Sanchez haddii ay ku guuldarreysato inay heshiis cusub la saxiixato – Gool FM
Haaruun Yuusuf March 29, 2017
(London), 29 Maarso 2017 –Wararka ka imaanaya Ingiriiska ayaa sheegaya in kooxda ARsenal ay 50 Milyan oo Giniga Istarliinka ah ku iibin doonto Alexis Sanchez haddii ay ku guuldarreysato in xagaagani ay la saxiixato heshiis cusub isla markaana xidiggu go’aansado in uu ka tegayo kooxda.
Sanchez ayaanan ku qanacsanayn natiijo xumada kooxda Arsenal, waxaana uu hakad geliyay wada hadallo heshiis kordhin ah oo ay kooxdu u soo bandhigtay illaa dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Wargeyska ‘London Evening Standard’ ayaa sheegaya in Arsenal ay rajo wayn ka qabto in ay heshiis cusub la gali doonto Sanchez, balse haddii howshu sidaa u dhici wayso waxay ku beecinaysaa 50 Milyan.
Dhinaca kale xidigga Chile ee Sanchez ayaa suuq fiican helaya maadaama kooxaha waaweyn ee Yurub ay si weyn u doonayaan waxaana naadiyada doonaya ka mid ah; Manchester City, Juventus, Paris Saint-Germain, Chelsea iyo Bayer Munich.
Eden Hazard oo dib ugu laabtay kooxdii uu ka soo far-camay...+SAWIRRO